Global Voices teny Malagasy » ‘Arakaraka Ny Ahafantaranao Ny Marina No Mahasorena Anao’: Andron’ny Mpanao Gazety ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
‘Arakaraka Ny Ahafantaranao Ny Marina No Mahasorena Anao': Andron'ny Mpanao Gazety ao Shina
Voadika ny 11 Novambra 2013 20:24 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
“Rafi-pitsarana matanjaka mba hiarovana azy ireo sy ny fahamendrehany” no tena ilain'ireo mpanao gazety ao Shina, hoy ilay mpanao gazety amin'ny fahitalavitra nilaza tamin'ny aterineto tamin'ny Andron'ny Mpanao Gazety , izay nankalazaina tamin'ny 8 Novambra.
Nandray anjara tamin'ny fitenenana ihany koa ireo mpanao gazety shinoa hafa, naneho ny ahiahin'izy ireo momba ny sivana, ny fampahalalam-baovaom-panjakana sy ny fahalalahan-gazety tao amin'ny Sina Weibo, habaka bilaogy madinika malaza indrindra ao amin'ny firenena.
Wang Shisi, mpanao gazety menavazana, nizara ny heviny:
Andron'ny Mpanao Gazety. Indreto ny fihetseham-poko rehefa niasa teo amin'ity sehatra ity nandritra ny 22 taona: 1. Nampijaliana ny vatako sy ny fanahiko; 2. Mahalala fomba fotsiny ny mpanjaka tsy manao satro-boninahitra. Raha raisinao am-pahamatorana izany, dia maty ianao, 3. Indraindray, arakaraky ny ahafantaranao ny marina no mahasorena anao; 4. Aza manara-maso na mitsikera raha tsy manana hevitra iombonan'ny maro ianao, sao lasa mivaro-tena ianao; 5. Tsy misy lalàna miaro, afaka miankina fotsiny amin'ny fiarovan'ny fikambanana; 6. Aleo kokoa manome tsiny an'i Etazonia toy izay manozona ireo mpitarika ao an-tanàna, 7.Tsy mila milaza ny marina ianao, kanefa aza mandainga; 8. Manàna fiainana tahaka ny mpivaro-tena, saingy miarova tena ho tahaka ny virijiny.
Nisy akony teo amin'ireo mpanao gazety marobe ny fanehoan-kevitr'i Shi, anisan'izany ilay mpanolotra fandaharana malaza amin'ny fahitalvitra Meng Fei [zh] izay nanipika hoe:
Andron'ny Mpanao gazety anio. Raha ny marina, tsy mila manao fety ireo mpanao gazety mba hanamafisana ny voninahiny, ny tena tadiaviny dia, rafi-pitsarana mafonja mba hiantohana ny fiarovana azy ireo sy ny fahamendrehany.
Ho fanehoan-kevitra noho ny famoretana “Big-V”  farany teo tao amin'ny media sosialy, mpanolotra fandaharana Hu Ziwei nandefa [zh] tononkalo nosoratanà mpanao gazety namany:
Tsy fankatoavana ny fahanginana, tsy mampiavaka anao manokana ny fahanginana, tsy fialàna an-daharana ny fahanginana, miteraka andraikitra ny fahanginana. Feo ny fahanginana, fahamarinana ny fahanginana. Raha hampitahaina amin'ny hevi-bahoaka, mangina ny gazety. Taona 2013, rendrika sy mitolona ny asa fanaovan-gazety. Mba tsy hahombiazan'ny korontan'ny tsy misy dia ilaina ny mahafantatra ilay korontan'ny tsy misy. — Namana mpanao gazety nanoratra tamin'ny Andron'ny Mpanao Gazety
Luo Changping, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety Caijing, nanoratra  [zh] hoe:
Tsy amin'ny governemanta ihany no iankinan'ny governemanta mangarahara, fa amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina ihany koa. Tahaka izany koa ny rafi-pitsarana, fanorenana lehibe amin'ny fametrahana governemanta mangarahara ny indostriam-baovao tsy miankina sy manana fahefana.
Mpanao gazety Deng Fei niantso ny amin'ny fampiasana ny mediam-baovao amin'izao vanim-potoana nomerika izao :
Niova ny fotoana rehefa nomena alalana hanaparitaka vaovao ny mpanao gazety, saingy mbola manana ny tanjaky ny teny, ny hevitra, ny hasina ary ny fahaizana mifandray isika. Tokony handroso miaraka amin'ny vanim-potoana isika, hanatsara ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fampiasana ireo karazana mediam-baovao sy hanaparitaka ny hasintsika amin'ny alalan'ny mediam-baovao na fitaovam-pampahalalam-baovaon'olon-tsotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/12/54110/
 Andron'ny Mpanao Gazety: https://globalvoicesonline.org/2006/11/09/china-happy-journalists-day/
 nizara : http://weibo.com/1338738570/AhKMKpGUk
 famoretana “Big-V”: https://globalvoicesonline.org/2013/08/13/china-creates-guideline-for-internet-celebrities-self-censorship/
 nandefa : http://weibo.com/1649189521/AhL3CroYu
 niantso ny amin'ny : http://weibo.com/1642326133/AhMcm9lc5